Ukuzibophelela kwethu kubucala-Tai ekuprinteni nasekupakisheni Co., Ltd.
Ukuzibophelela kwethu kwimfihlo
I-Tai ekupakisheni izinikele ekuxhaseni ubumfihlo bakho. Ukuqinisekisa ukuba uyimfihlo, sithumele esi saziso sichaza lonke ulwazi esiluqokelelayo nendlela esilusebenzisa ngayo.
Intoni We Collect
Umsebenzi wesiza sethu ukusebenzela abathengi bethu kwaye ubavumele ukuba bazalisekise iimfuno zabo ngokulula nangokungaqhelekanga kangangoko. Singaluqokelela olu lwazi lulandelayo:
Ukusetyenziswa kwe Ulwazi
Ulwazi esiluqokelelayo lusetyenziselwa ukuqonda iimfuno zakho kunye nokuphendula imibuzo yakho. Asiboneleli ngolwazi kumaqela angaphandle ngaphandle kolwazi lokuhambisa olufunekayo ukuhambisa iimveliso kubathengi. Singahlala sithumela ii-imeyile zentengiso malunga neemveliso ezintsha, izibonelelo ezizodwa okanye olunye ulwazi esicinga ukuba unokufumana umdla usebenzisa idilesi ye-imeyile osinike yona. Ungayirhoxisa inkonzo ye-imeyile ngalo naliphi na ixesha.
Ukuzinikela kwethu kuKhuseleko lweDatha
Sizimisele ukuqinisekisa ukuba ulwazi lwakho lukhuselekile. Ukuthintela ukufikelela okungagunyaziswanga, ukugcina ukuchaneka kwedatha, kunye nokuqinisekisa ukusetyenziswa kolwazi ngokuchanekileyo, sibeke iinkqubo ezifanelekileyo zomzimba, ze-elektroniki kunye nezolawulo ukukhusela ulwazi olukhuselweyo kwi-intanethi.
Sisebenzisa iikuki zendlela yokuchonga ukuba ngawaphi amaphepha asetyenziswayo. Oku kusinceda sihlalutye idatha malunga nokugcwala kwiphepha lewebhu kunye nokuphucula iwebhusayithi yethu ukuze siyilungelelanise neemfuno zabathengi. Sisebenzisa olu lwazi ngeenjongo zohlalutyo lwamanani. Sinokusebenzisa olu lwazi ukukunika intengiso okanye intengiso.
Ngokubanzi, ii-cookies ziyasinceda ukuba sikunikeze iwebhusayithi ebhetele ngokusenza sikwazi ukujonga ukuba leliphi na iphepha olifumana liluncedo kwaye ungenalo. Icookie ayiniki ndlela yokungena kwikhompyuter yakho okanye kuyo nayiphi na ingcaciso ngawe, ngaphandle kwedatha okhetha ukwabelana nathi ngayo. Unokukhetha ukwamkela okanye ukwala ii-cookies. Uninzi lwebrawuza zamkela ngokuzenzekelayo ii-cookies, kodwa unokutshintsha iseto sebrawuza yakho ukwala ii-cookies ukuba ukhetha njalo. Oku kunokukuthintela ekusebenziseni ngokupheleleyo iwebhusayithi.
Qhagamshela kwi Other Websites
Iwebsite yethu inokuqulatha amakhonkco kwezinye iiwebhusayithi. Nangona kunjalo, nje ukuba usebenzise ezi linki ukushiya indawo yethu, kuya kufuneka uqaphele ukuba asinalawulo kwenye iwebhusayithi. Ke ngoko, asinakuba noxanduva lokhuselo kunye nemfihlo yayo nayiphi na ingcaciso oyinikezayo ngelixa undwendwela ezo ndawo kwaye ezo ndawo azilawulwa yile ngxelo yabucala. Kuya kufuneka ulumke kwaye ujonge ingxelo yabucala esebenzayo kwiwebhusayithi ekuthethwa ngayo.
Ukulawula Yyethu Personal Iulwazi
Unokukhetha ukuthintela ukuqokelelwa okanye ukusetyenziswa kweenkcukacha zakho. ukuba ubusivumile ngaphambili usebenzisa ulwazi lwakho buqu ngenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo, ungatshintsha ingqondo yakho nangaliphi na ixesha ngokubhalela okanye usithumelele i-imeyile ku- service@taiinpackaging.com, Isihloko: Uhlaziyo lweenkcukacha zakho.
Asizukuthengisa, sisasaze okanye siqeshise iinkcukacha zakho kubantu besithathu ngaphandle kokuba sinemvume okanye sifunwa ngumthetho ukwenza njalo.
Ukuba uyakholelwa ukuba naluphi na ulwazi esikubambe kuwe aluchanekanga okanye aluphelelanga, nceda ubhalele okanye usithumelele i-imeyile ngokukhawuleza. Siza kulungisa kwangoko naluphi na ulwazi olufunyenwe lungachanekanga.
Ukuba unayo eminye imibuzo okanye inkxalabo malunga nale migaqo-nkqubo yabucala, nceda usithumelele i-imeyile apha service@taiinpackaging.com.
Ingxowa yokukhuthaza, Isipho sokuKhuthaza, Ibhokisi yeZipho zeLamin, Ibhokisi yeZipho, Yenyuka ibhokisi Carton, Iibhokisi zezipho zezipho,